“ပရိသတ်တွေ အံ့အားသင့်စေမယ့် ကျော်ကျော်ရဲ့ ဖောက်ပြန်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်” - Myannewsmedia
“ပရိသတ်တွေ အံ့အားသင့်စေမယ့် ကျော်ကျော်ရဲ့ ဖောက်ပြန်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်”
ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနေတတ်သူ သရုပ်ဆောင် ကျော်ကျော်ကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးလည်း ချစ်ခင်ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်နော်.။ ကျော်ကျော်ကတော့ ဇာတ်ရုပ်တိုင်းကို ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ ဆုမြတ်နိုးဦး ၊ညီထွဋ်ခေါင်တို့နဲ့အတူ ပေ့ခ်ျထောင်ကာ ပရိသတ်တွေ အမောပြေစေမယ့် ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကို တင်လေ့ရှိပါတယ်.။
ကျော်ကျော်က သူ့ရဲ့ အကောင့်ကနေလည်း ပျော်ရွှင်စေမယ့် အခွီဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကို တင်လေ့ရှိပြီး ပျော်ရွှင်လွတ်လပ်စွာ စနောက်နေတတ်တဲ့သူပါ.။ ဒီနေ့ ဇွန်လ (၁၉)ရက်နေ့မှာတော့ ကျော်ကျော်က ပရိသတ်တွေကို ဂျင်းထည့်တဲ့ ဟာသဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခုကို “ဖောက်ပြန်ထားတဲ့ video HD အကြည်.. ဖေ့ဘုတ်က ဖြုတ်ချနိုင်တာမို့ မြန်မြန်ဒေါင်းထားကြ” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်။.
ဗီဒီယိုလေးကတော့ ဖောက်ပြန်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်ဆိုပြီး အအေးဘူးဖောက်ပြီး ပြန်တဲ့ အခွီ Scene လေးကို ရိုက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်..ပရိသတ်ကြီး.။ပရိသတ်ကြီးအတွက်လည်း ကျော်ကျော်ရဲ့ ဟာသဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို ခွီနိုင်အောင် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက် ပါတယ်နော်.။
ပြျောပြျောရှငျရှငျ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနတေတျသူ သရုပျဆောငျ ကြျောကြျောကိုတော့ ပရိသတျကွီးလညျး ခဈြခငျရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျ ထငျပါတယျနျော.။ ကြျောကြျောကတော့ ဇာတျရုပျတိုငျးကို ပီပွငျအောငျ သရုပျဆောငျနိုငျတဲ့ သရုပျဆောငျကောငျးတဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ။ သူငယျခငျြးတှဖွေဈတဲ့ ဆုမွတျနိုးဦး ၊ညီထှဋျခေါငျတို့နဲ့အတူ ပခြေျ့ထောငျကာ ပရိသတျတှေ အမောပွစေမေယျ့ ဗီဒီယိုဖိုငျလေးတှကေို တငျလရှေိ့ပါတယျ.။
ကြျောကြျောက သူ့ရဲ့ အကောငျ့ကနလေညျး ပြျောရှငျစမေယျ့ အခှီဗီဒီယိုဖိုငျလေးတှကေို တငျလရှေိ့ပွီး ပြျောရှငျလှတျလပျစှာ စနောကျနတေတျတဲ့သူပါ.။ ဒီနေ့ ဇှနျလ (၁၉)ရကျနမှေ့ာတော့ ကြျောကြျောက ပရိသတျတှကေို ဂငျြးထညျ့တဲ့ ဟာသဗီဒီယိုဖိုငျလေးတဈခုကို “ဖောကျပွနျထားတဲ့ video HD အကွညျ.. ဖဘေု့တျက ဖွုတျခနြိုငျတာမို့ မွနျမွနျဒေါငျးထားကွ” ဆိုပွီး သူ့ရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျလာခဲ့ပါတယျ။.
ဗီဒီယိုလေးကတော့ ဖောကျပွနျထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျဆိုပွီး အအေးဘူးဖောကျပွီး ပွနျတဲ့ အခှီ Scene လေးကို ရိုကျထားတာပဲဖွဈပါတယျနျော..ပရိသတျကွီး.။ပရိသတျကွီးအတှကျလညျး ကြျောကြျောရဲ့ ဟာသဗီဒီယိုဖိုငျလေးကို ခှီနိုငျအောငျ ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျ ပါတယျနျော.။
Previous post မိသားစုနဲ့အတူရှိရတဲ့အချိန်တိုင်းမှာ ပျော်ရွှင်ရလွန်းလို့ ဒီတစ်သက် ယောကျာ်းတောင်ရပါ့တော့မလားဆိုပြီး စဉ်းစားမိနေတဲ့ အေးမြတ်သူ
Next post နေ့စဉ်ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ဘ၀ပုံစံကို ဖွင့်ဟပြောပြလာတဲ့ Song Joong Ki